သူကြီးမင်း (တုံးဖလား): သူကြီးမင်းရဲ့ ဘလော့ဂါဒေး ပုံပြင်
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 03:59
ဘလော့ဒေးအမှတ်တရလေးကို ဖတ်ပြီး ပြုံးရတယ်။
သူကြီးမင်းလည်း စိတ်ချမ်းသာ၊ ကိုယ်ကျန်းမာစွာနဲ့ တုံးဖလားရွာကြီးကအင်တာနက်ထဲမှာ ပေါ်ကာဆွဲနိုင်ပါစေ.(အဲလေ.. မှားလို့) ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်တောင်းပါတယ်။
Wednesday, 31 August 2011 at 05:23:00 BST
ဘလော့ဒေး မှာအမှု့ လိုက်နေသလား-
ဟို ---ဆေးများဖေါ်နေသလားလို့ လာကြည့်တာဗျ-
ပုဂံဘုရားဖူးသွားတယ်ဆိုတော့ သာဓု သာဓု သာဓု ပါ
Wednesday, 31 August 2011 at 05:31:00 BST
ဟားဟား.. မမေဓါဝီကို ခွေ့သွားလိုက်သေးတယ်... :D
Wednesday, 31 August 2011 at 05:51:00 BST
happy blog day ပါ..တဂျီးမင်း
Wednesday, 31 August 2011 at 07:00:00 BST
Happy blog day ပါအကို ရေ:)
ဘုရားဖူး လိုက်ခဲ့မယ်နော် အကို:P
Wednesday, 31 August 2011 at 07:41:00 BST
လူပျိုသူကြီးမင်းရေ အိမ်သာနက်ထဲက ပေါ်ကာဒေးအကြောင်းဖတ်သွားပါတယ် ဟိဟိဟိ အတော်ရီရတယ် အစဉ်အမြဲအားပေးနေပါတယ်ခင်ဗျ ။
Wednesday, 31 August 2011 at 09:30:00 BST
သူကြီးမင်း ရဲ့ ဘလော့ဒေးပို့စ်လေးက တမျိုးလေးဘဲ ဖတ်ပြီး ပြုံးပျော်ချင်စရာပါ
စကားမဆက် သူကြီးမင်းက အိမ်သာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပိုစ်တွေမှာ ပရို ကျတယ် ဟဲဟဲ ခင်မင်လို့ စတာပါ
Wednesday, 31 August 2011 at 09:57:00 BST
အိပ်သာနတ်ထဲမှာဝင်ပြီး ပေါ်ကာတင်လားဗျ သူဂျီးမင်း
Wednesday, 31 August 2011 at 10:25:00 BST
Wednesday, 31 August 2011 at 10:31:00 BST
အိမ်သာနက် ထဲမှာ ဂျိုကာသုံးကောင် နဲ့ ဒေါင်းသွားတာ လက်စသတ်တော့ သကြီးမင်း ဖြစ်နေတာကိုး
သြ ချရလောက်အောင် အိမ်သာ ပရိုဖြစ်လှပါတယ်
နောက်တခါတော့ မစားခင် သကြီးပိုစ့် ကိုမဖတ်တော့ဘူး
Wednesday, 31 August 2011 at 10:46:00 BST
ကော်မန့်က ရေးပြီးတင်လိုက်တာ တက်သွားပြီထင်နေတာ ဘယ်များရောက်သွားပါလိမ့်..
ဧကန္တ သူဂျီးမင်းရဲ့ အိမ်သာနက်ထဲ ကျသွားတယ် ထင်ပါ့။
သူဂျီးတို့များ အိမ်သာထဲတောင် ဖဲရိုက်ရတယ်လို့ သြောချရလောက်ပါရဲ့။း)
ဒါနဲ့ ဖဲရိုက်ရင်း အစားအသောက်တွေရော မစားကြဘူးလား တော်တော်ချိုမှာဘဲနော်
မောင်ပေါက်ကျော်က သူဂျီးမင်းကို ပြန်ပြောမယ်မှန်းသိရင် အငြိမ့်လေးဘာလေးနဲ့ ဧည့်ခံလိုက်ပါတယ် ပိုစည်ကားသွားအောင်လေ။
သူဂျီးရဲ့ ပေါ်ကာဒေး (အဲလေ) ဘလော်ဂါဒေးကလည်း တစ်မျိုးတစ်ဖုံထူးခြားပြီး ပျော်ဖို့ ကောင်းနေပြန်ရော။
ဒါနဲ့ .. ဖဲဖျော်ရည် ဘယ်လိုနေတုန်း ဈေးကွက်မှာ တင်ရောင်းဖို့ စိတ်ကူးရှိသလား သူဂျီးး)
Wednesday, 31 August 2011 at 10:48:00 BST
အင့် နာမည်လည်း ပါဘူး။ သွား လူဆိုး။
့Happy Blog Day ပါ သူကြီးမင်းရေ။ ဒါနဲ့ သူကြီးမင်းက အိမ်သာအကြောင်း ကောင်းကောင်းသိတာပဲလား။ အိမ်သာမျိုးစုံ အကုန်သိနေတာပါလား။ ဖတ်ရင်းနဲ့ ရယ်နေရတယ်။
ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပြီး အောင်မြင်စွာ ဆက်လက်ငင်နိုင်ပါစေနော်...
Wednesday, 31 August 2011 at 12:20:00 BST
ဒီလိုမြှောက်ပေးမှန်းသာသိရင် သူကြီးကို ပန်းသီးမရောင်းခိုင်းဘဲ ဂေါပကလူကြီး လုပ်ခိုင်းမှာ။
ဘလော့ဂ်ရွာသူရွာသားတွေ ခင်ခင်မင်မင် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ရှိကြတာ ဝမ်းသာစရာပါပဲ။
Wednesday, 31 August 2011 at 13:33:00 BST
အလိုလေး...ထူးဆန်းလိုက် ထွေပြားလိုက်ပါတဲ့ အိမ်သာနက်ပါလား သူကြီးရယ်...ဖဲရိုက်စရာ နေရာက တကယ့်ကို မဟာဗျူဟာ မြောက်လှချေလား...ကျလိုက်လို့ကတော့ ညစာရော မနက်စာပါ သုံးရက်လောက်လွတ်မယ့် ကိန်းကြီးမို့ တွေးရင်းနဲ့တောင် ကြောစိမ့်လာတယ်...
သူကြီး အခုလို ပုံပြောကောင်းတာ ဆရာဘုန်းကြီးရဲ့ ဖဲပြာသောက်ခဲ့လို့ဖြစ်မယ်...အရှိန်မပျက်ဘဲ နေ့တိုင်းဆက်သောက်သွားရင် တစ်နေ့နေ့မှာတော့ သူကြီးလည်း ဖဲမှော်အောင်သွားမယ်ထင်ရဲ့...း)))
ဘလော့ဂ်ဒေးပို့စ်ထဲမှာပါ ပုံပြင်ပြောဖြစ်အောင် ပြောသွားတဲ့ သူကြီးကတော့ အန်းဒါးဆင်းနဲ့ အရင်ဘ၀က ဆွေမျိုး ကိုးဆယ့်ခြောက်ဝမ်းကွဲများ တော်ခဲ့သလားမသိဘူးဗျို့...
အသာမာန်ဖီတဲ့ ဆရာဟန်ကြည် ကာရန်ကတော့ မနိပ်ဘူး သူကြီးရယ်...ဆရာဟန်ကြည်က အသာမာန်မဖီဘူးဗျ...တစ်ခါတည်း အပြီးကိုက်ထည့်တာ...ဟားဟား...တကယ်ဆို ကာရန်ပီတဲ့ ဆရာဟန်ကြည်ဆို ဟုတ်သေး...း)))
Wednesday, 31 August 2011 at 13:45:00 BST
ရယ်ရွှင်ဖွယ် ဘလော့ဂ်ဂါဒေးပုံပြင်လေးကို ကြည်နူးစွာ ဖတ်သွားပါတယ် ကိုကိုမောင်ရေ။
ဘုရားဖူးလာမည့်နေ့ လူအရေအတွက်နဲ့ တခါတည်း ဘုတ်ကင်တင်ထားနော် အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲချက်ကျွေးမလို့း))
Wednesday, 31 August 2011 at 14:25:00 BST
မသိတာ မရှိ ၊ မစားဖူးတာ မရှိရလေအောင်
ဖဲပြာထမင်း နဲ့ ဟင်းလေးပါ
စားကြည့်လိုက်လေ .. :D
ဟက်ပီး ဘလော့ဒေး ..း))
Wednesday, 31 August 2011 at 17:19:00 BST
ဟားဟားဟား . . ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်နေပါစေ။ မရရအောင်တော့ သူ့ရွာကို ဇာတ်လမ်းထဲ ထည့်ရေးလိုက်သေးတာပဲပေါ့လေ။ ဂွတ်ထအိ။
Wednesday, 31 August 2011 at 19:11:00 BST
စွယ်စုံရ သဂျီးမင်း ကိုရင်ဘ၀က ဖဲပြာတွေသောက်လို့ အသက် ၈၀ ကျော်ထိ အသားအရေ နုဖတ် အုအက်နေတာ ထင်တယ်နော်။
နောက်တခါ မင်းဂန်ရွာမှာ ဆုံရင် သဂျီးအတွက် စပယ်ရှယ် ဖဲပြာဖျော်ရည် တဂါလံ လက်ဆောင်ပေးပါ့မယ်။
Wednesday, 31 August 2011 at 20:05:00 BST
ထုံးစအတိုင်း သဂျီးရဲ့ ရသလေးများကတော့ အမြဲဖတ်ကောင်းနေတာပါပဲ..။ နောင်နှစ်နောင်နှစ် ဘလော့ဂ်ဒေးပေါင်းများစွာ ပျော်ရွှင်စွာ ဘလော့ဂင်းနိုင်ပါစေ..
Thursday, 1 September 2011 at 14:19:00 BST
ဟိုက် အိမ်သာထဲမှာ ဖဲရိုက်တယ်လို့ ကြုံဖူးပေါင် ဂုဏ်ထူးဆောင်ရယ်။ ဂယ်ပဲ။း) တော်သေးတယ် သရဲခြောက်တယ်ထင်ပြီး ပြေးလို့ မပြေးပဲ....ဆိုရင်။ ဟိဟိ။
Friday,2September 2011 at 06:36:00 BST
အဲ...တဂျီးရေ.....ဘယ်လိုကဘယ်လို တဂျီးရဲ့ ဘလော့ဒေး
ပို့စ်ကို ကျော်သွားပါလိမ့်ဗျာ...၊ခုမှတွေ့လို့ ခုမှလာရတယ်..
ကျွန်တော့်စိတ်ထင် ၃၁ရက်နေ့က ကျွန်တော့်ဆိုက်မှာလင့်
တော့ ဘုရားဖူးကအပြန် ကျွန်တော့်တည်းခိုခန်း....အဲ...
နားခိုရာလေးမှာ လာတည်းခဲ့ရင် ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ ရေအဝ
Friday,2September 2011 at 11:00:00 BST
Friday,2September 2011 at 16:55:00 BST
တဂျီးမင်းတို့လုပ်ချလိုက်မှဖြင့် ဘလော့ချာ၊ ဘလော့နာတွေ ဖြစ်...ဘလော့ဒေးကလည်း ပေါ်ကာဒေး ဖြစ်...တတ်လည်းတတ်နိုင်တဲ့ အိမ်သာ expertကြီး ပါလားနော်..ခွိ..ခွိ..အိမ်သာနက်မှာ ပေါ်ကာဒေါင်းနေ ပါစေဗျား...
Saturday,3September 2011 at 05:38:00 BST
သူကြီးမင်း နဲ့ မောင်ပေါက်ကျော်
တင်မကဘူး အိမ်သာနက် ပေါ်က ပေါ်ကာဒေး
ကိုပါမြင်မိတော့ အိပ်ချင်နေတာတွေတောင် ဘယ်ရောက်ကုန်မှန်းမသိတော့ဘူး အရမ်းရယ်ရတယ်
ဒါနဲ့ ပေါ်ကာဖျော်ရည်က ဘယ်လိုနေတုန်းဗျ နောက်တစ်ခါ ရွာကိုလာရင် တစ်ပေပါလောက် ဖျော်ထားချင်လို့ပါ။
Saturday,3September 2011 at 18:23:00 BST
ခွက်ထိုးခွက်လန်ရယ်စေတယ်း)း)
Wednesday,7September 2011 at 15:58:00 BST
သဂျီးမင်းရဲ့ ပို့စ်က အရမ်းချက်ကျလက်ကျ ရှိသလို သဂျီးမင်းကို မန့်သွားတာတွေကလည်း ရိုက်ချက်ပြင်းလို့
Saturday, 10 September 2011 at 11:05:00 BST
custom essay writings online said...
US, where the participation of citizens in the political life of the country is one of most custom essay writings online
Tuesday, 8 January 2013 at 15:37:00 GMT
Bhyisn [url=http://hermeskelly.finniwolf.com][b]hermes sale[/b][/url] hermes cape cod watch http://hermeskelly.finniwolf.com Thzwof Qcxkuo hermes handbags
Friday, 19 April 2013 at 06:30:00 BST
my web blog ... nutcracker
Wednesday, 15 May 2013 at 08:25:00 BST